के प्रत्येक दिन सेक्स गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ ? - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 14:13
एक स्वस्थ जीवनको लागि सेक्स पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको दिमागमा यो प्रश्न उठिरहेको होला कि दैनिक सेक्स गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ या छैन भनेर ? त्यसोभए हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि सेक्सले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यलाई के फाइदा गर्छ भनेर, दैनिक सेक्स गर्नुका धेरै फाइदाहरू हुन्छन। आशा छ कि यस लेखले तपाईंलाई स्वास्थ्यका लागि सेक्सले के के फाइदाहरू र्पुयाउँछ भन्ने बारे जानकारी दिनेछ।
भर्खरै गरिएको अध्ययन एवम अनुसन्धानले यो कुरा पत्ता लागेको छ कि सेक्स गर्नु तपाईंको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। सेक्सको समयमा तपाईंको मस्तिष्कबाट विभिन्न केमिकलहरू निस्कन्छन जसले तपाईंलाई तनावबाट टाढा राख्न मद्दत गर्दछ, साथै यौनसम्बन्धले हाम्रो शरीरलाई पूर्ण आराम पनि दिन्छ।
दैनिक सेक्स गर्दा के फाइदा हुन्छन ?
१. तनाव कम गर्दछ ।
दैनिक सेक्सले एन्डोरफिन हर्मनहरू बढाउँने काम गर्दछ। जसले तनाव कम गर्दछ, भने थप सेक्सको मुड बढाउने कार्य गर्दछ। सेक्स पनि व्यायामको एक रूप हो भन्ने कुरा नर्बिसिनुहोला, जसले तनाव कम गर्न र शान्त रहन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ भने, केवल आफ्नो पार्टनरको साथमा बसेर माया गर्नुहोस। के यो सजिलो छैन र? हो, यो तनाव कम गर्ने सब भन्दा चाँडो तरीका हो र स्वस्थ रहनको लागि उत्तम तरिका हो।
२. हृदयघात सम्वन्धि स्वास्थ्यमा सुधार गर्दछ ।
हालसालै गरिएको एउटा अध्ययनमा यो भनिएको छ कि हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी सेक्स गर्ने पुरुषहरूलाई महिनामा एक पटक भन्दा कम सेक्स गर्ने पुरुषहरूको तुलनामा ह्ृदयघात वा हर्ट अट्याकको सम्भावना कम हुन्छ। यदि तपाइँको मुटु स्वस्थ छ भने, तपाइँको शरीर स्वस्थ रहन्छ।
३. शरिरको प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ ।
जब तपाईं नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ, यसले इमयुन बुस्ट वा एन्टिबडी इम्युनोग्लोबुलिनको स्तर बढाउँछ, जसले तपाईंको शरीरलाई सामान्य चिसो र ज्वरोजस्ता रोगहरूबाट जोगाउँदछ र यस्ता रोग सँग लड्न पनि मद्दत गर्दछ।
४. शरिरको विभिन्न दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
यदि तपाईको टाउको वा शरिरको अन्य भाग दुखेको महशुस गर्नु भएको छ भने तपाई आराम गर्नुको साथ साथै सेक्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यसो गर्दा तपाईको टाउको दुखेको आफैमा निको हुन्छ। वास्तवमा, जब तपाईं सेक्स गर्न चाहानुहुन्छ, हर्मोन अक्सीटोसिनको स्तर पाँच गुणा बढ्छ। यो एन्डरफिनले वास्तवमा तपाइँको पीडा कम गर्दछ।
५. रक्तचापको जोखिम कम गर्दछ ।
यदि तपाईं धेरै तनावमा हुनुहुन्छ भने यसले तपाईंलाई उच्च रक्तचापको खतरा पनि बढाउँछ। उक्त समयमा तपाईले यौन सम्बन्ध राख्नु भयो भने, यसले तपाईको तनाव कम हुन्छ र तपाईको रक्तचाप पनि नियन्त्रणमा आउँछ। वास्तवमा सेक्सले स्नायुहरूलाई आराम दिन्छ र मस्तिष्क पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
६. तपाइ नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ भने जवान रहनुहुन्छ ।
यदि तपाईं आफुलाई जवान राख्न चाहनुहुन्छ र पिम्पल्स वा सुक्खा छालाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंले दैनिक सेक्स गर्नुपर्छ। सेक्स पश्चात, तपाईं आफैंले देख्नुहुनेछ कि तपाईंको छाला दिन प्रतिदिन स्मुथ हुन थाल्नेछ। यो प्राकृतिक चमक को लागी, तनाव हटाउन र सकारात्मक सोचको लागी पनि अपनाउन सकिन्छ। तपाईंले सेक्स को मात्रा जति बढाउँनुहुन्छ त्यती तपाईंको स्वस्थ सम्बन्ध विकास हुनेछ। तपाईको छालामा चमकको लागी पनि सेक्स महत्वपुर्ण रहेको छ।
७. भावनात्मक रुपमा बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यौन स्वास्थ्यको लागि मात्र राम्रो नभएर, यसले दुई पार्टनरहरू बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। कुनै पनि सम्बन्धलाई सफल बनाउनको लागि भावनात्मक रूपमा बलियो हुनु महत्वपूर्ण छ। यसले तपाईंको भावनाहरू नियन्त्रणमा मद्दत गर्दछ र तपाईंको पार्टनरको विश्वास पनि बढाउँदछ।
८. प्रोस्टेट क्यान्सर रोक्दछ ।
सेक्सले प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम कम गर्दछ। यौन सम्पर्कको समयमा, शुक्राणु तपाईको शरीरको प्रोस्टेट ग्रंथिबाट निस्कन्छ। यदि हामीले लामो समयसम्म सेक्स नगरेमा, शुक्राणु ग्रंथिमा जम्मा हुन थाल्दछ, जसले प्रोस्टेट क्यान्सरको समस्या बढाउन सक्छ। तसर्थ, तपाईले हप्तामा एक पटक सेक्स गर्नु उत्तम हुन्छ।
९. निद्राको समस्या हटाउँछ ।
दैनिक सेक्स गरे पछि मिथो निद्रा लाग्छ, तपाईलाई त्यतिबेला धेरै स्फूर्ति र आन्नदको महसुस हुन्छ। यदि तपाईं निद्राको समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाई निद्रा सम्बन्धी समस्या बारे डक्टरसँग कुरा गरेर छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै प्रकारको औषधि लिनु भन्दा तपाईले सेक्स गर्नुभयो भने तपाईको समग्र स्वास्थ्यको लागि फाईदा हुनेछ ।
१०. पूर्ण रूपमा फिट रहनको लागी ।
यदि तपाईं जिम जानुहुन्छ वा घरमा व्यायाम गर्नुहुन्छ भने, त्यसको साथ साथै यौन सम्बन्धले पनि तपाईलाई पूर्ण रूपमा फिट राख्न मद्दछ गर्छ। दैनिक सेक्स गरेर वजन कम गर्न पनि सकिन्छ। पुर्णरुपमा फिट रहनको लागी नियमित व्यायाम र सेक्स जरुरत हुन्छ र यसले तपाईंलाई धेरै रोगहरूबाट पनि बचाउनेछ।
११. दिनभरि फ्रेस महशुसको लागी ।
एक अध्ययनका अनुसार बिहानको सेक्स गर्ने मानिसहरूले आफ्नो दैनिक तनाव राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दछन र उनीहरूको मुड पनि फ्रेसहुन्छ र दिन पनि राम्रो हुन्छ। मुड स्विंग समस्या भएकाहरूको लागि सेक्स उत्तम विकल्प हो।
तपाईले पढिसक्नु भएको छ कि दैनिक सेक्स गर्दा के फाइदा हुन्छ। यसरी तपाईं आफुलाई र तपाईंको पार्टनरलाई स्वस्थ राख्नको लागी सेक्स गर्नु उत्तम हुनेछ।